Ny sakafo avy amin'i Elena Anisimova
Ny fomba malaza indrindra amin'ny fihenan'ny lanjany dia ny sakafo. Ny tombony amin'ity fomba fitsaboana ity dia ny karazana safidy fitsaboana isan-karazany sy ny fahafaham-baraka mandritra ny fotoana fohy.
Na dia izany aza, ny zava-drehetra dia mavitrika tokoa raha ny marina, araka ny voasoratra ao amin'ny dokam-barotra momba ny sakafo. Vehivavy maro no miatrika ny fahantrana ara-tsakafo, vokatra ratsy eo amin'ny endriky ny aretina sy ny fahasimbana eo amin'ny fahasalaman'ny hoditra, ny volony ary ny fantsika. Ankoatr'izay, ny ampahany amin'ny sakafon'ny firaisana ara-drariny ihany no mitondra azy hatramin'ny farany. Maro ireo - miongana, tsy afaka manohitra ireo fepetra henjana amin'ny sakafo.
Ny sakafo dia tsy tokony hanamaivana ny vatana, tokony ho tsara sy mahafinaritra, hitondra fanatsarana ny fahasalamana, fihenam-bidy ary hatsaran-tarehy tsara. Mba hahatratraranao izany, dia tsy maintsy manaraka ireo sakafo ireo ianao, izay notanterahin'ny mpikaroka sakafo za-draharaha.
Dietitianina Elena Anisimova
Elena Anisimova, Dietitian, dia nanampy ny vehivavy mavesatra mandritra ny folo taona mahery. Niasa tao amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany izy, izay niompana tamin'ny ady amin'ny adhesage. Ny fanabeazana ny sakafo ara-tsakafo sy ny traikefa amin'ny asa dia nitarika azy ho amin'ny fahatakarana tahaka izao momba ny sakafo:
Ny sakafo ara-tsakafo dia tokony hamboarina manokana ho an'ny olona rehetra izay te ho very.
Ny sakafo dia atao amin'ny fijerena ny toetry ny fahasalamana, ka tokony ho fantatry ny mpikaroka momba ny fisian'ny aretina mitaiza sy mahatsiravina, ary mahazatra ny vokatry ny fitsapana;
Ny sakafo ara-tsakafo dia tokony handinika ny voka-dratsin'ny vatan'ny mpanjifa, izay ahafahana manangona vatana;
Amin'ny dian-tsakafo, mety mila manitsy ny sakafo ianao;
Mety mila fanampiana ara-tsaina avy amin'ny sakafo ara-tsakafo ny olona mena iray;
Ny sakafo dia tokony handinika ny tsiron'ny tsindrin-tsakafo;
Ny sakafo dia tokony miaraka amin'ny fanolorana ny fampiharana azy, toro-hevitra, fitsaboana ara-batana ary fanasitranana.
Ny alaina rehetra nataon'i Elena Anisimova dia natsangana tamin'ireo fitsipika ireo, noho izany dia mora kokoa ny manaraka, ary ny vokatr'izy ireo dia mahavariana fotsiny. Voninahitra ho an'ny sakafo ara-tsakafo ny mitondra ny vehivavy na ny lehilahy tsirairay amin'ny lanjany. Mba hanaovana izany, dia ampiharina ny fomba fanaraha-maso sy fanitsiana ny sakafo.
Anisimova dia mandray tranga isan-karazany mifandraika amin'ny lanjany tafahoatra . Ny zazavavy kely izay be loatra dia teraka aminy; vehivavy nahazo lanja nandritra ny fitondrana vohoka, ary ny vehivavy efa zokinjokiny. Te-ho tonga saina sy mahasalama kokoa izy ireo.
Ny sakafo fisakafoan'i Elena Anisimova
Ny sakafo fisakafoanana dia natao ho an'ny tsirairay. Na izany aza, mikasa ny hanaraka ny toro-hevitra momba ny sakafo i Anisimova fa tsy sakafo ara-dalàna, fa lasa fomba fiaina iray ho an'ny olona iray. Manitsy ny tsirairay amin'ny sakafo mahasalama izy io, manoro hevitra ny handao ny vokatra mampidi-doza ary mampiditra ny fitsipiky ny sakafo tsy misaraka.
Ny sakafo dia natao amin'ny fomba izay tsy mba noana ny vatana mihinana, ary tsy misy ny tsy fahampian-tsakafo ao anatiny. Mihinàna haingana amin'ny sakafo Tsy hiasa i Anisimova. Efa ela ny fihinanany rehetra, ka ny vatana no mitondra azy ireo amim-pahamendrehana sy amim-pahatoniana araka izay tratra. Ankoatr'izay, dia sakafo maharitra no mitarika ho amin'ny fatiantoka be loatra ny lanjany, ary tsy hanafoana ny tsy fisian'ny rano tsy ilaina. Mandritra izany fanao izany dia alefa any amin'ny toeram-pivarotana matavy any amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana ny angovo. Miaraka amin'ny fanafoanana ny livitra fanampiny, ny fihenan'ny vehivavy manatsara ny fahasalamana. Izany dia noho ny fanafoanana ny toaka avy amin'ny vatana, ny fanatsarana ny tsinay sy ny fatran'ny metabolism .
Rehefa misafidy fialana amin'ny fatiantoka ianao, dia tsy maintsy dinihinao ny toetran'ny vatanao. Na izany aza, ny safidy tsara indrindra dia ny manaraka ny sakafo, nofantenana tsirairay avy amin'ny sakafo sakafo za-draharaha.
Usama Hamdiy - sakafo atody
Ny sakafo Kremlin - tabilao
Sakafo amin'ny atody
Sakafo ho an'ny tsy fahombiazana amin'ny renena
Kefir sakafo - 7 andro 10 kg
Sakafo misy legioma
Ny fitsaboana ny adenoids folk remedies
Lalao malaza ho an'ny ankizy
Manosotra vinaingitra amin'ny hafanana
Ahoana ny hiverina havan-tiana?
Sardonyx Stone - Properties Magic
Karazam-bolo - inona avy, karazan-tsarimihetsik'ireo akanjo marevaka indrindra amin'ny akanjo
Style - Summer 2014
Finoa ambany jacketsa ho an'ny vehivavy
Ny fanenjehana ankapobeny dia vokany
Inona no tsaratsara kokoa hohanin'ny lanjany?
Margot Robbie: Tena sarotra ny nilalao tao amin'ny "Tonya manohitra ny rehetra"!
Akalifa - torohevitra momba ny fikarakarana voninkazo tsy mahazatra